नेपाली काङ्गेस साम्यवादको हाउगुजी देखाएर जनमत बटुल्न खोज्दैछ : भट्टराई » एभरेष्ट अनलाईन खबर
नेपाली काङ्गेस साम्यवादको हाउगुजी देखाएर जनमत बटुल्न खोज्दैछ : भट्टराई
November 13, 2017 एभरेष्ट अन्लाईन खबर	0 Comments
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन अब दुई हप्तामात्र बाँकी छ । नेकपा(एमाले)को नेतृत्वको बाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन विचमा कडा प्रतिस्पर्धा भई रहेको छ । आसन्न निर्वाचन र समसामयिक राजनीतिको बारेमा हाम्रा सम्बाददाताले नेकपा(एमाले)का नेता निर्मल भट्टराईसंग गरेको कुराकानीः
स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि एमालेले नेतृत्व गरेको बाम गठबन्धनले ठूलो अग्रता लिने आंकलन गरिदैछ, यसलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
मैले यसलाई अत्यन्त स्वभाविक आंकलनको रुपमा लिएको छु । जनताले अरु विकल्प नभएको कारण एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई भोट दिने लगभग पक्का छ । आफ्नो नेतृत्वको प्रथम कम्युनिष्ट सरकारको पालामा ०५१ सालमा देश विकास र सामाजिक रुपान्तरणको लागि एमालेले जुन नीति बनायो, ०४६ साल र ०६२ ६३ सालमा लोकतन्त्रको लागि उसले जे कुर्वानी गर्यो, त्यही नै आज सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने प्रमुख आधार हो । अहिले एमालेको समग्र नीति र नेतृत्वसंग समकालीन नेपाली राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कोही छैन । एमाले नेतृत्वको बाम गठबन्धन बनेपछि यसको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसले देशभरि साना ठूला पार्टीको गठबन्धन बनाएको छ । तर, बाम गठबन्धनले अत्यधिक स्थानमा विजय हासिल गर्नेछ ।
तपाईंले नीति र नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो, अरु पार्टीहरुमा पनि नीति र नेतृत्व त होला नि ?
सबैलाई थाहा छ, नेपाली कांग्रेस नेकपा(एमाले)संग प्रतिस्पर्धामा छ । आधा शताब्दी अघि वि पीले भनिदिएका, लेखिदिएका केही शब्दावलीहरु घोकेर कांग्रेस आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । समाजको परिवर्तनसगै ती विचार असान्दर्भिक भईसकेको उनीहरुलाई थाहा छैन । उनीहरु वि पी मन्त्रको मालामात्र जप्दछन् । जहाँसम्म नेतृत्वको सवाल छ, वि पी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोईरालाले जे ईतिहास कांग्रेसमा बनाएर गए, त्यो उचाई समकालीन कांग्रेसी नेताहरुले प्राप्त गर्ने संभावना नै छैन । तर तपाईंले एमालेलाई हेर्नुभयो भने नीति र नेतृत्व सधै उचाईमा रहेको छ, सन्तुलनमा रहेको छ । तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, महासचिव ईश्वर पोख्रेल, अरु नेताहरुको परिपक्व नेतृत्व पाएको एमाले जननेता मदन भण्डारीको वैचारिक मार्गदर्शनको सिर्जनात्मक र द्वन्द्ववादी ढंगले अनुशरण गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्र पनि फरक पृष्ठभूमिमा ठूलो बलिदान र संघर्ष गरेर आएको पार्टी हो । माओवादी केन्द्रसंग पनि एमाले जस्तै आसलाग्दो नेतृत्व पुञ्ज छ । देशको तीब्र विकास र समृद्धि गर्न आज यी दुई भीमकाय पाटीहरु एक ठाउँमा आई पुगेका छन् । जनताले यसलाई असाध्य सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेका छन् ।
बाम गठबन्धन अधिनायकवाद लाद्न बनेको हो भनिदैछ नि ?
हेर्नुस् यो नेपाली कांग्रेसले चलाएको चुनावी प्रोपोगाण्डा मात्र हो । मदन भण्डारीले सूत्रबद्ध गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद आज सबै बाम घटकको साझा सिद्धान्तको रुपमा विकसित हुदैछ । विगतमा माओको विचारभन्दा एक ईन्च एताउता गर्नु हुदैन भन्ने नेताहरु नै आज त्यसको प्रशंसक बन्न थालेका छन् । यो नेपालका सबै बामहरुको धुरी सिद्धान्तको रुपमा विकसित हुदैछ । यो सिद्धान्तलाई तपाईंले हेर्नुभयो भने उच्चतम लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै समाजवादतर्फ जाने यसको सार भेट्नु हुन्छ । फेरि अबको संसारले न बामपन्थी न दक्षिणपन्थी अधिनायकवाद स्वीकार गर्दछ । यो साम्यवादको हाउगुजी देखाएर भोट बटुल्ने कांग्रेसको चालवाजी हो भन्ने सचेत जनताले बुझेकै छन् ।
एमालेका अध्यक्ष के पी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जनताले राष्टवादी भनेर बुझ्ने कि मधेशविरोधी ?
तपाईले यो महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नु भयो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली , माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमात्र होइन, सिङ्गो बाम गठबन्धन नै राष्टवादी हो । उसले ईतिहासमा देशको राष्टिय अखण्डता , सार्वभौमिकता र राष्टिय एकताको सधै पक्षपोषण गरेको छ । जहाँसम्म मधेश विरोधको कुरा छ, बाम गठबन्धन मधेश विरोधी होइन । मधेशका केही नेताहरु, जो देशलाई नै बन्धक बनाएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न चाहन्छन्, संग यसको असहमति हो । कहिले नाकाबन्दी गर्ने, कहिले देशलाई अप्ठ्यारो पार्न छिमेकीसंग हार गुहार गर्ने प्रवृत्तिसंग नेपाली जनताको, बामपन्थी दलहरुको संघर्ष हो । यसलाई कसैले मधेशविरोधी भन्ने परिभाषा गरेका छन् । तर वास्तविकता त्यस्तो होईन । विगतमा भन्दा बाम शक्ति मधेशमा मजबुत बन्दै गएबाट यो आरोप आफैं खण्डित भएको अवस्था छ । एमाले र माओवादी त मधेशी जनताको हक हितमा लडिरहेका पार्टी हुन् , बरु मधेशमा विनाकारण अशान्ति मच्चाएर जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्न चाहने केही मधेशी नेताचाहिँ मधेशविरोधी हुन् ।
स्थानीय निवाचनले नवगठित पार्टीहरु र साना पार्टीहरुलाई खास स्थान दिएको देखिएन, आसन्न चुनावमा उनीहरुको कस्तो प्रभाव देख्नुहुन्छ ?
जहाँसम्म नवगठित पार्टीहरुको कुरा छ, पहिलो कुरा , ती पार्टीका नेताहरु आफ्ना पुराना मान्यताबाट बाहिर आउन सकेनन् । उनीहरुले जनताको मत जित्न ठूलो मेहनत गर्नु पर्ने अवस्था देखियो । प्रस्ट भन्नु पर्छ— उनीहरु संविधानको थ्रेसहोल्ड कटाउने सामथ्र्य राख्दैनन् । अहिेलेको चुनाव प्रचारलाई तपाईंले हेर्नुभयो भने नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका डा. बाबुराम भट्टराई नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा अलिअलि चर्चामा छन् । विवेकशील साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्रले काठमाण्डौमा राम्रै चर्चा पाएका छन् । तर अरुको नामो निसान छैन । दोश्रो कुरा, जनताको मतदान ढाँचालाई हेर्दा अब देशमा धेरै पार्टी राख्ने पक्षमा जनता देखिदैनन् । साथै क्षेत्रीय, जातीय नारा बोकेर राजनीति गर्ने पार्टीहरु पनि जनताको प्राथमिकतामा छैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
← बामपन्थी गठवन्धन फुटाउन खोज्ने सबै चलखेल असफल : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
नेपाल प्रहरीमा ४ जना डिआईजी एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस →